Musqusha Naxaasta Qubayska Qubayska 2-Handle 4 Inch Centerset
Bogga ugu weyn / Qubeyska Musqusha / Centerset Furaha qasabadu Musqusha / WOWOW Musqusha Naxaasta Qubayska Qubayska Daloolka 2-Handle 4 Inch Centerset
WOWOW qasabada 100 boqolkiiba CADAADADA LOO BAARAY - dhammaan qasabadaha ayaa lagu falanqeeyay cadaadis adag oo biyo sare ah si loo damaanad qaado tayada sare iyo adkeysiga. 4 inch qasabadaha musqusha baahsan, dhismaha naxaas tayo sare leh qurux premier dhamaadka loogu talagalay waxqabadka Life qaabeynta casriga ah.
2321200RB tilmaamaha rakibaadda
Saliida lagu xoqay qasabadaha naxaasta 2321200RB faahfaahinta:
Haddii aad ka fiirsaneyso waxyaabahayaga ugu dambeeyay, fadlan haka waaban inaad nala soo xiriirto qiimaha qiimaha.
XARUNTA. Qolka Musqusha oo leh laba Qubays oo QAABKA QALABKA AH: Qasab -gacmeed laba -laab ah ayaa toos u ah in la saxo biyaha oo ay weheliso xakamaynta heerkulka biyaha.
NADAAFADDA LOO ISTICMAALO GOLAHA DURINKA OO KU JIRA: Saliidda la mariyay qasabadda musqusha ee naxaasta ah waxaa ka mid ah isu -ururinta biraha, biyaha ayaa ka soo baxaya tuubada tuubada iyada oo lagu riixayo usha wiishka, taasoo ka hortagaysa in gacmahaaga la dhaqay kor loo nuugo.
SINKA DHABTA SALIGA SABABAY BARASHADA: laba gacmo -gacmeed oo qaab -dhismeed ah oo qaab -dhismeedka retro classic ah. La dagaallama daxalka. Tubbada wax aan waxba tarayn ee korontada ku rakiban ee ku habboon guriga kirada, kondho cusub, hal qol ah, guri matoor, jiidaha safarka iyo isticmaalka guriga. Fadlan nala soo xiriir haddii wax su'aalo ah.
SKU: 2321200RB Categories: Centerset Furaha qasabadu Musqusha, Qubeyska Musqusha Tags: kilinilaha xarunta, musqusha inch centre, Naxaasta Saliida Sunta Lagu Dhoobo
Naxaasta Saliida Sunta Lagu Dhoobo
Daawaha Zinc / ahama